I-WinX DVD Ripper, uguqule iiDVD zakho ezindala zibe yi-MP4 ngokulula | Iindaba zeGajethi
UNacho Cuesta | | software
Kumsitho wokubhiyozela uSuku lweWars Wars, I-WinXDVD ifuna ukuyibhiyozela ngesitayile ukubonelela ngamathuba okuphumelela amabhaso ahlukeneyo anje ngePS4, iiDVD zeSaga yeStar Wars, iithoyi kunye neelayisensi zemihla ngemihla ezingama-500 zesicelo seWinX DVD Ripper.
Enkosi kwizixhobo ezinje ngeWinX DVD Ripper sinokudlulisa nayiphi na ifayile kwiDVD disc malunga nemizuzu emihlanu ngokukhawulezisa kweGPU. Ixesha elincinci ukubona ukuba ngaphambili kwakuthatha njani ukwenza ukhuphelo malunga neyure enesiqingatha okanye ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kubini kuxhomekeke kumthwalo womsebenzi.
Ukwenza ikopi ye-movie endala okanye yanamhlanje kwi-MP4 kuya kukuvumela ukuba uyithumele ngaphandle, umzekelo, kwi-pendrive kwaye uyibukele ngaphandle kwesidingo somdlali. Ngaphandle koko, kukho amanyathelo angaphezulu kwamathathu okuqala kunye nemizuzu embalwa ukuyithumela ngaphandle kwifolda engagqibekanga yesicelo, kwiiVidiyo zeWinXVideos.
1 Isipho sokubhiyozela usuku lwe-Star Wars
2 Guqula imovie ibe yenye ifomathi ngamanyathelo amathathu
3 Isicelo esisetyenziswa kakhulu
4 Ungayiguqula njani ividiyo kwisicelo
Isipho sokubhiyozela usuku lwe-Star Wars
Rhoqo ngo-Meyi 4, kubhiyozelwa uSuku lweWars Wars, ifranchise eyenziwe nguGeorge Lucas kwaye wazalwa ngo-1979, iminyaka engama-42 iyonke ukusukela kumdlalo bhanyabhanya wokuqala. I-WinXDVD ithathe isigqibo sokuveza umsitho okhethekileyo ngezipho zabathathi-nxaxheba, abaya kuba nakho ukuphumelela iiDVD zesaga yePS4.
Umkhankaso wokubhiyozela uSuku lweMfazwe yeWinXDVD ungathatha inxaxheba ngokwabelana ngemifanekiso ye-Star Wars ukongeza ekuphenduleni iphepha lemibuzo le-Star Wars kunye nokujoyina iQela leFacebook leWinXDVD. Iikopi ezingama-500 zeWinX DVD Ripper zinokuphumelela ngokwabelana yonke imihla.
Umkhankaso we-Star Wars ngumzobo ombini, umjikelo wokuqala uqhuba ukusuka ngo-Epreli 24 ukuya kuMeyi 5; Umjikelo wesibini u-Meyi 6 ukuya ku-13. Inguqulelo yesipho seWinX DVD Ripper ivumela abasebenzisi ukuba bafumane isoftware ebonakalayo epheleleyo kwiintsuku ezili-15 emva kokuvula. Ukuphuculwa kwenguqu yexesha leWinX DVD Ripper kunesibonelelo esikhethekileyo sexesha elimiselweyo, ukuze ube nokuhlaziya kwilayisensi yobomi yeWinX DVD Ripper ngesibonelelo esikhethekileyo.
Guqula imovie ibe yenye ifomathi ngamanyathelo amathathu
Ezona cinephiles zihlala zineemovie kwiiCD nakwiiDVD, zigcina ingqokelela enkulu bhanyabhanya, kunye nothotho lweenkqubo zikamabonakude. Ngemoto enzima yanamhlanje, kufuneka kuphela ukuyidlulisela kwenye yazo kwaye uyidlale ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesidlali seDVD / Blu-Ray, sebenza ukuba isicelo seWinX DVD Ripper sikwenze kube lula.
Xa uvula iWinX DVD Ripper, ikubonisa ujongano olucacileyo nolulula, ikwabonisa isikhokelo sokwazisa ukuqala ukusebenzisa isixhobo sokuhlela. Njengoko kubonisiwe kwiwebhusayithi, kukho amanyathelo amathathu ekufuneka uwaqale kwaye ukrazule loo bhanyabhanya, uthotho okanye uxwebhu.
Inkqubo iya kuboniswa kwiwindow ephezulu ngasekunene, ke uya kuyibona yonke imifanekiso kude kube sekupheleni emva koko udlale loo fayile nakwesiphi na isixhobo esidlala loo fomathi. Ukuba yi-MP4, baninzi abayenzayo, kubandakanya neethelevishini nge-Smart TV ngezibuko ezibandakanyiweyo ze-USB.
Isicelo sineefomathi ezininzi zokuvelisa kwimeko apho ufuna ngaphandle kwe-Mp4, xa ufaka idiski, cofa kwiDiski (icon yeDVD), ucofe kuyo kwaye iya kuqala ukulayisha ide ikubonise zonke iifayile, phakathi Kwezona zaziwa njenge-AVI, i-MP4 ye-iPad kunye ne-iPhone, iWMV, iMPG, iM4V kunye neMMV, phakathi kwezinye ezininzi.
Isicelo esisetyenziswa kakhulu
I-WinX DVD Ripper iyakwazi ukukrazula ii-DVD ezindala kwi-MP4, FLV, AVI, MOV, iifomathi ze-MP3, kunye nokufundeka kwi-iPhone, i-iPad, i-Android, iWindows kunye neMac. ifayile ebhalwe kule diski ofuna ukuyikhupha kwikhompyuter ngalo mzuzu kanye.
Ukongeza, isixhobo sisebenza ngayo nayiphi na i-DVD, kubandakanya iiDVD ezonakeleyo, ezingakhiwanga kakuhle, iiDVD ezindala, ezisandula ukukhutshwa, kunye nayo nayiphi na ingqokelela yakho. Ihlala ifunda iidiski nganye ngaphandle kwengxaki, isenza ikopi efanelekileyo yezo vidiyo uzigcinileyo.
I-WinX DVD Ripper iya ngaphaya kokugqithisa zonke iifayile ngokukhawuleza, ikwanika ithuba lokusika, ukudibanisa, ukunciphisa inxalenye yeevidiyo, ukongeza imixholo engezantsi okanye ulungelelanise iiparameter. Isicelo sibandakanya itekhnoloji yokukhawulezisa i-Layer 3 yokwenza umsebenzi wenziwe malunga nemizuzu emihlanu, ixesha eliphantsi.
Ungayiguqula njani ividiyo kwisicelo
Ukuguqula ngokukhawuleza iDVD ibe yifomathi efundekayo kuso nasiphi na isixhobo esifuna idiski ekuthethwa ngayo kunye nesifundi / irekhoda seDVD kwiPC, nokuba yiWindows okanye iMac OS. Ukwenza ikopi yenza oku kulandelayo:
Faka idiski yeDVD kwiDVD player / umbhali
Cofa kwiDiski ebonisa igama elithi DVD kwaye ucofe ku "Kulungile"
Kuya kuthatha nje imizuzwana embalwa ukuyilayisha ukukunika zonke iifomathi ekunokwenziwa ikopi ngqo yefayile
Khetha ifomathi yemveliso oyifunayo, umzekelo enye yezona zisetyenziswayo ngoku yi-MP4, cofa u "Kulungile" kwakhona kwaye uqale ukukrazula, cofa iqhosha u "Run" ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwaye ulinde ukuba iprojekthi igqibe
Khumbula ukuba ikubonisa indlela eya kwifayile engezantsi, apho ithi "Ifolda yendawo"
Ukuba usithande isicelo, khumbula ukuba unokufumana iphepha-mvume lakho simahla ukuthatha inxaxheba kwiphulo lokubhiyozela uSuku lweMfazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Phumelela i-Star Wars PS4, iiDVD kunye nezinto zokudlala. Thatha inxaxheba kwaye ufumane i-WinX DVD Ripper simahla